I-villa yangasese ye-3 yokulala ene-pool yangasese ye-nusa dua
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSelly
I-Askara Nusa Dua Villa-yeyona villa ithuleyo nenoxolo kwikona yale paradesi siyibiza ngokuba yiBali! Le ndawo intle kwaye inobunewunewu likhaya elifanelekileyo leholide ukuze abahlobo kunye neentsapho baphumle kwaye bazonwabele. I-nirvana ezolileyo ayinakuba ngaphezulu!
Le villa inemigangatho emibini ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye yenzelwe ukuba ngasese kunye nokhuseleko engqondweni, inamagumbi okulala ama-3 abanzi, ichibi labucala langaphandle, ibhafu yangaphakathi eshushu, i-terrace yangaphandle, igadi encinci, indawo yekhitshi, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala, kunye negumbi lomntu ovulekileyo. indawo yokupaka enesango labucala! Kungaphakathi kweqela le 'Dancing Villas' apho iindwendwe zikwazi ukufikelela kwezinye ii-2 zechibi lechibi elijikeleze indawo yeqela, ngalinye linobungakanani obuphantse bube sisiqingatha sekhilomitha okanye i-1700ft ubude!
Olunye ufikelelo luvaliwe ngexesha lobhubhani olunje ngeendawo zokutyela, kunye neebhari. Amachibi oluntu kunye namachibi abucala asavuliwe.
Le villa ibekwe ngaphakathi kweqela leDancing Villas apho ibonelela ngemeko ekhuselekileyo nefihlakeleyo ngokucoceka okuqaqambileyo kunye nococeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Selly
Ndifumaneka ngombhalo nange-imeyile. Nceda ungalibazisi ukunxibelelana nam malunga neminye imibuzo. ndingavuya ukunceda ♡